अर्थ – Page 20 – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अर्थ (page 20)
वीरगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अशोक साह नियन्त्रणमा
October 5, 2015 अर्थ 0
असोज १८ । मुलुककै प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्जमा नाकाबन्दीको प्रभाव निकै परेको छ । मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण त्यहाँ प्रभाव निकै परेको हो । त्यस नाकावाट सोमबार पनि आयात निर्यात ठप्प बन्यो । मुलुकमा खपत हुने कुल इन्धनको ७० प्रतिशत पेट्रोल डिजेल यही नाका भएर भित्रिने गरेको भए पनि त्यहाँबाट …
दश दिनदेखि पूर्णरुपमा बन्द जोगवनी–विराटनगर नाका खुल्दै
October 4, 2015 अर्थ 0
असोज १७ । दश दिनदेखि पूर्णरुपमा बन्द जोगवनी–विराटनगर नाका आइतबारबाट खुल्ने भएको छ । विराटनगर रानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख कृष्ण बस्नेत र भारत जोगवनी भन्सारका प्रमुख प्रनेश गुप्ताबीच आइतबार पाँचबुँदे सहमति भएपछि नाका खोल्न लागिएको हो । सामान जाँचको प्रक्रियालाई सहज बनाउने, ग्यास, इन्धन, खाद्यान्न र औषधिलगायत सामानलाई सहज रुपमा …
भारतले अघोषित नाकाबन्दी खुल्यो, सोमवारबाट आपुर्ति सहज
October 3, 2015 अर्थ 0
असोज १६ ।भारतले अघोषित नाकाबन्दी शनिवारबाट हटाएको छ । भारतले झण्डै दुई सातादेखि नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाएर सोमबारबाट इन्धन आपूर्ति सहज बनाउने आश्वासन दिएको हो । नेपालका घोषित र अघोषित दूतहरुले दिल्लीमा गरेको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि भारत नेपालतर्फको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सहमत भएको हो । भारतीय बिदेश मन्त्रालयले नेपालमा …
हुण्डीमा प्रहरीको आँखा, हुण्डी कारोवारीलाई जोगिनै धौ–धौ
October 1, 2015 अर्थ 0
असोज १४ । हुण्डी ? यो कस्तो अवैध आर्थिक कारोबार हो, जुन ब्यक्तिको सञ्जालबाट चल्छ । नेपालमा घुसदेखि अपहरणकारीलार्इ बुझाउने फिरौतीसम्म यही माध्यामबाट हुने गर्छ । आतंकबाद र संगठित अपराधमा संगग्नले आर्थिक लेनदेनमा यो माध्याम अपनाएपछि आन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रतिबन्धित हुण्डी कारोबार नेपालमा अझै कतिसम्म सक्रिय रहेको छ भन्ने बुधबारको घटनाले …
भैरहवा भन्सार खुल्यो, एक सय बढी गाडी निर्वाद नेपाल आए
September 30, 2015 अर्थ 0
असोज १३ । भैरहवाको बेलहिया नाका बुधबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल र भारत दुवै देशका सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीको आजको बैठकले भारतमा रोकिएका मालबाहक सवारीसाधन नेपालमा भित्र्याउने निर्णय गरेसँगै अहिले भैरहवा भन्सार नाकाबाट निर्वाध मालबाहक सवारीसाधन भित्रिरहेको छ । भैरहवाको बेलहिया नाकाबाट १०० बढी मालबाहक ट्रक तथा बस नेपाल …
२०४५ सालको नाकाबन्दीमा कसरी आयात भएको थियो तेल ?
September 27, 2015 अर्थ 0
असोज १० । ०४५ तिर नेपाल आयल निगमले ग्लोबल टेन्डरमार्फत तेस्रो मुलुकबाट डिजेल र मट्टीतेल खरिद गरी भारतीय आयल कर्पोरेसन ९आइओसी०लाई बेच्ने गर्दथ्यो । जुन देशबाट सस्तो मूल्य पेस हुन्थ्यो, त्यही देशबाट डिजेल र मट्टीतेल खरिद गरी आइओसीलाई बिक्री गर्दा निगमले नाफासमेत कमाउने गरेको थियो । र, आइओसीबाट पेट्रोल, …
४०० मालबाहक गाडी आउने सुनौली नाका अहिले पनि ठप्प
असोज १० । नेपालको जारी संविधानप्रति असन्तोष पोख्दै आएको भारतले पछिल्लो समय नेपाल–भारत सीमा नाका बेलहिया ठप्प पारेको छ । जसका कारण भारतका विभिन्न स्थानबाट माल लिएका ट्रकहरु भारतीय बजमर सुनौली ३० किलोमिटर टाढासम्म लामबद्ध भएका छन् । भारतीय भन्सारले सामान लिएर नेपाल आउन लागेका ट्रकमा समयमै सामान जाँचपास …
विराटनगर र जोगवनी भन्सारका अधिकारीबीच वार्तापछि स्थिति सहज हुने अनुमान
September 26, 2015 अर्थ 0
असोज ९ । तीन दिनदेखि अघोषित नाकाबन्दी भइरहेको विराटनगर भन्सारको आवतजावत सुरु गर्न विराटनगर भन्सार र जोगवनी भन्सारका अधिकारीबीच वार्ता भएको छ । शनिबार जोगवनी भन्सारमा भएको छलफलमा दुवै नाकाबाट आयातनिर्यात सहजरुपमा गर्न अनौपचारिक सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । विराटनगर भन्सार कार्यालयले नेपाल पक्षको मोर्चाको आन्दोलनका कारण तीन दिनदेखि …
भारतले यसरी सुरु गर्दैछ नेपालमा नाकाबन्दी
September 22, 2015 अर्थ 0
असोज ५ । भारतले पट्रोलियम पदार्थ बोकेका नेपाली ट्यांकरलाई रोकेर नाकाबन्दीको संकेत गरेको छ । सीमा नाका बन्द गर्ने संकेत देखाएको भोलिपल्ट भातले यस्तो हर्कत देखाएको हो । रक्सौलबाट तेल भरेर भन्सार आइपुगेका तेल ट्यांकरहरुलाई भारतले मंगलबार नेपाल प्रवेश गर्न नदिएपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दीको प्रष्ट संकेत गरेको छ । सीमाक्षेत्रमा …
२६ करोडभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको आरोपमा उर्जामन्त्रीलाई कारवाहीको निर्देशन
September 18, 2015 अर्थ 0
असोज १ । २६ करोडभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । खेलकुद मन्त्री पुरुषोतम पौडेललाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको दुई हप्ता पनि वित्न नपाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्का मन्त्री ज्ञवालीलाई पनि कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष सिफारिस गरेको …